Ikhala elivuzayo - iyisici ezingeke kudidaniswe lutho, ngoba ngaso sonke isikhathi elinesimo ukudedelwa isikhwehlela kusukela ekhaleni. Kumele ziphathwe, ikakhulukazi izingane, ngoba kukhona njalo ingozi izinkinga.
Rhinitis ezinganeni - into lalivamile, ngoba iziguli walonyaka kunamavesi lincane kakhulu acinene, okwenza kube expectoration nzima kakhulu isikhwehlela. Le nkinga ngokuvamile kwenzeka izinsana emavikini ekucala 10 zokuphila. Lokhu akudingekile ukuba aphathe amakhala yisisu. Kufanele sikwazi ukufunda hhayi ukuzama ukuqeda imithi ngokusebenzisa njalo.
Kodwa uma coryza ikhulela ingane, izinto zihluke kakhulu. Ubonakala ngenxa ukungenisa ukutheleleka ingahlala-10 izinsuku. Njengomthetho, rhinitis oyingozi eyenzeke SARS, ngoba igciwane noma imvelo ezithathelwanayo. Futhi kufanele kuthathwe.
Kufanele uyinaka rhinitis e ingane akakabi libe nonyaka owodwa ubudala. Izingane mucosa siyakhukhumala ingaphakathi ngokushesha acinene lincane, kanti amasosha omzimba esebuthakathaka kakhulu. Izinsana akudingeki wazi kanjani ukushaya impumulo yakho, ngoba isikhwehlela eshiya kanzima ngokwanele. Ngakho-ke kubalulekile lapho kuqubuka yesifo ngokushesha uxhumane onguchwepheshe kuya imithi inikezwa. Into wukuthi ngokungabi bikho lokwelapha lungaba ngcono ukuthuthukisa rhinitis ezingamahlalakhona ezinganeni, sinusitis, otitis abezindaba noma pharyngitis.
Njengomthetho, amakhala yisisu ezinganeni - akuyona inkinga ezimele walandisa iyiphi nezifo ezithathelwanayo. Ngoba okokuqala udinga welaphe imbangela, bese nemiphumela yaso.
Rhinitis umntwana kuleli cala - yokusabela okuvikela umzimba, ngawo uzama ukumisa ukutheleleka futhi ungabeki ke sivulekile, bronchi kanye namaphaphu. Ngoba umsebenzi oyinhloko ukuphathwa - ukuvimbela omiswe le mucosa acinene. Iqiniso liwukuthi uma lokhu kwenzeka, ingane uphefumula ekhaleni, okuholela omiswe we isikhwehlela emaphashini eside. Futhi lokhu kuyindlela isiqiniseko sokuthuthukisa izinkinga ngemva kokuhlinzwa, ezifana nenyumoniya.
Ukuze wenze lokhu, udinga isikhathi ukuze embule rhinitis ezinganeni. Izimpawu ze-ke, njengoba umthetho, lokhu okulandelayo:
ekhaleni stuffy, isikhwehlela, sneezing.
Ingane akakwazi ukuphefumula ngokusebenzisa ekhaleni ngokukhululekile.
Uma abazali bathola ukuthi ingane yabo izimpawu ka-acute rhinitis, njengoba kushiwo ngenhla, kufanele aphathwe ngokushesha. Ukuze wenze lokhu, kumele wenze imisebenzi eminingana:
Moisten emoyeni ekamelweni lapho umntwana ekhona. Kungenjalo, ingane kuyoba nzima ukuphefumula, kuyoba yome lwamafinyila ukuthi babhebhethekise isimo.
Ingane kufanele siphuza neziphuzo kakhudlwana efudumele.
Kungcono bangcwabe amathonsi ekhaleni amafutha, e isixazululo ethile uLwandle Lukasawoti.
Uma ingane kube nzima ukuphefumula kakhulu, ungasebenzisa yezokwelapha ukuncela isibani noma esikhethekile isikhwehlela uyephuza sopelki. Kodwa ukukwenza kangcono ingcosana.
Uma isimo ngeke alulame, kodwa avele zimpawu ezilandelayo, kubalulekile ukuze ujike kuchwepheshe:
umphimbo obuhlungu noma kufushane kokuba umoya.
Ingane uyenqaba ukudla.
Ikhala elivuzayo ihlala izinsuku ezingaphezu kwezingu-14.
ukopha acinene noma ubovu steel.
Vospitatelskaya ukusebenza nabazali eqenjini lesibili abasebasha
Kukhula kakhulu eminyakeni yobudala yomntwana. ithebula ukukhula
Ukubonakalisa tube izinsana: izinkomba ukusetshenziswa
Car Ukucaciswa GAS-53: umthwalo, idivayisi, futhi wesifunda
Uyini Pulsar: definition, izici futhi amaqiniso athakazelisayo
AAA amabhethri futhi izindlela zabo zokubumba ukushaja
Ngale ndlela umntwana umbandamu: ukwelashwa, izimpawu kanye izimbangela
Isimilo ifilimu "Star Wars" Yoda. Imisho, izingcaphuno,